यसरी ट्रान्सफर गर्नुहोस् नेपाल टेलिकमको ब्यालेन्स – TechPana | Digging into Tech
आईतवार, माघ ५, २०७६ - 7:22 PM
काठमाडौं । तपाई नेपाल टेलिकमको प्रिपेड सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ ? प्रिपेड सिमबाट अर्को प्रिपेड सिममा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने तरिका तपाईलाई थाहा छ ? ‍छैन भने यहाँ हामी तपाईंलाई त्यसको जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
टेलिकमको युएसएसडी कोड र एप प्रयोग गरी दुई किसिमबाट प्रिपेड मोबाइलको ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ । यदी युएसएसडीमार्फत ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने *४२२* पछि सेक्युरिटी कोड (जुन सिम कार्ड खरीद गर्दा प्राप्त हुन्छ) टाइप गर्नुहोस् र पुनः ‘*’ टाइप गरी ब्यालेन्स पठाउनुपर्ने नम्बर टाइप गरी फेरी ‘*’ टाइप गरेर ट्रान्सफर गर्न खोजेको ब्यालेन्स रकम टाइप गरी ‘#’ राखेर कल गर्नुहोस् । यति गरेपछि छिनभरमै तपाईको प्रिपेड ब्यालेन्स ट्रान्सफर हुन्छ ।
मोबाइल ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने तरिका
यदि तपाई नेपाल टेलिकमको एपबाट यो सेवा लिन चाहानुहुन्छ भने सुरुमा टेलिकमको एप डाउनलोड गर्नुहोस् । अब एप खोलेर ‘ट्रान्सफर’ ब्यालेन्समा ट्याप गर्नुहोस् ।
त्यसभित्र गएर ब्यालेन्स प्राप्त गर्ने फोन नम्बर टाइप गर्नुहोस् । त्यसपछि ट्रान्सफर गर्न चाहेको ब्यालेन्स रकम पनि उल्लेख गर्नुहोस् ।
सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज
त्यसपछि ओकेमा ट्याप गरी ओटीपी कोडको प्रतिक्षा गर्नुहोस् । ओटीपी कोड प्राप्त भएपछि त्यसलाई इन्टर गरेर, भ्यालिडेट ओटीपीमा ट्याप गर्नुहोस् । यति गरेपछि तपाईंको ब्यालेन्स सफलतापुर्वक ट्रान्सफर हुन्छ ।
फ्रिक्वेन्सी लिलामीको छानबिन गर्दै संसदका अर्थ र लेखा
यसरी हेर्नुहोस् टेलिकमको मोबाइल र ल्याण्डलाइनको बिल